Momba anay - LANGFANG OLAN GLASS BEADS CO., LTD
Niorina tamin'ny 2010, LANGFANG OLAN GLASS BEADS CO., LTD dia mpanamboatra vakana fitaratra matihanina any Shina, miaraka amin'ny teknolojia famokarana mandroso, ny orinasa dia nahita fitomboana isan-taona ho an'ny orinasa mahomby ankehitriny. Azontsika atao ny manamboatra vakana fitaratra isan-karazany ho fiarovana ny làlana sy ny tanjona indostrialy. Ary ny orinasa dia natokana ho an'ny indostrian'ny fiarovana ny arabe miaraka amin'ny iraky ny manam-pahaizana momba ny fiarovana ny arabe.
Ny vokatra lehibe anananay dia ny vakana fitaratra azo itarafana ho an'ny fanamarihana ny lalana, vakana fitaratra fasika, microspheres tsy misy lavaka, vakana fitaratra fitaratra, vakana fitaratra avo lenta ary vakana fitaratra miloko. Ny vakana fitaratra azo itarafana amin'ny fanamarihana ny arabe dia iray amin'ireo vokatra malaza indrindra, amin'ny fampiasana fitaovana avo lenta amin'ny fanamarihana, manolotra faharetana, fiarovana ary fahitana mandritra ny taona izahay, miaraka amin'ny vakana fitaratra tafiditra ao anaty fitaovanay mba hamirapiratra mandritra ny alina.
Miaraka amin'ny traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny famokarana sy fanondranana entana, ny vokatra dia nahazo ny laza tsara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena noho ny kalitao ambony sy ny vidin'ny fifaninanana. Ny fitaovanay dia voatazona hatrany, nohatsaraina ary nitombo ny fahafaha-miasa mba hamaly ny fitakiana mitombo ho an'ny vokatra. Ny fampiharana tsy tapaka ny rafi-pamokarana dia fitaovana manohana antsika hahatratra ny ISO 9001: 2015 Certification.
Miorina amin'ny fampivoarana ny teknolojia, ny orinasa dia hitandrina tsara amin'ny fitantanana ifotony, kalitao milamina, manatsara hatrany ny serivisy alohan'ny varotra, ny varotra ary ny serivisy aorian'ny fivarotana, ary ny fampiroboroboana ny fifaninanana eo amin'ny tsenan'ny vokatra. Hatramin'ny niorenan'ny fototra dia mitazona ny finoana ny "orinasa voalohany, miorina amin'ny mpanjifa, ny kalitao tsara indrindra ary ny vidiny mirary" ny orinasa. Manantena ny handre avy aminao sy ny anjara birikinao amin'ny fampandrosoana izahay amin'ny ho avy. Hanome serivisy sy valiny ho an'ny mpanjifa ambony izahay. Misaotra anao tamin'ny orinasanao sy ny fanohananao! Langfang Olan Glass Beads Co., Ltd no ho mpiambina anao eny an-dalana.